Madaxweynaha Puntland oo diiday caanshuur dhaaf ay Puntland horay u sameysay – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland oo diiday caanshuur dhaaf ay Puntland horay u sameysay
Madaxweynaha cusub ee Puntland
Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi (Deni), ayaa warqad uu soo saaray waxay mamnuucday caanshuur dhaaf/dhism horay loogu sameeyey Hay’adaha Dowlad Goboleedka Puntland iyo Hay’adaha kale, ee isugu jira kuwo caalamiya iyo qaar gudaha ka shaqeeya.
Warqadda Xafiiska Madaxweynaha kasoo baxday waxay si toos ah ugu socotay Wasaaradda Maaliyadda, si ay u fuliso amarkaas ka soo baxay Madaxweynaha Puntland. Sida ku qoran warqadda, waxaa go’aankaas wax ka og Madaxweyne Kuxigeenka, Xisaabiyaha Guud iyo Wasaaradaha Dowlad Goboleedka Puntland.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi (Deni), oo uu wehliyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan (Karaash), ayaa war uu shalay helay Kalfadhi waxay sheegayeen inuu kala hadlay Wasaaradda Maaliyadda sidii ay u ilaalin lahayd hantida Puntland.
Saciid Cabdullaahi (Deni) waxaa dikreetadii ugu horeysay ee uu soo saaro, isla markii la doortayba, uu ku hakiyey dhamaan dhaqdhaqaaqyadii maaliyadeed ee Puntland, isagoo amray inaan wax lacag ah laga bixin karin khasnadaha maamulkiisa ilaa amar dambe. Taas ayaa muujineysa siduu ahmiyad gaar ah ugu haayo arrimaha dhaqaalaha Puntland.
Xildhibaan sheegay in berri Golaha Shacabka la horkeenayo Hindise beddelaya Xeerka Bangiga Dhexe
Wasaaradda Maaliyadda oo maanta daah-furtay isticmaalka Miisaaniyadda 2019-ka